Dị ka ngwa ngwa nke akụ na ụba, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha karịa ime ka ndụ ime mmụọ ha kawanye mma, obere TV na LCD enweghị ike igbo mkpa ha ọzọ. A na-ahazi ọtụtụ mmemme na mmemme na-eme kwa ụbọchị, dị ka klọb DJ, nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, egwuregwu, mmemme nzukọ ọgbakọ. Nnukwu ngosipụta mgbazinye na-eme ka ọrụ niile na ihe omume na-enwu gbaa na agba ya nke ọma vidiyo mmetụta, nchapụta dị elu, ihu na nlele sara mbara, njiri mara mgbasa ozi dị. MPLED na-elekwasị anya n'inye mgbapụta ime ụlọ / n'èzí dị elu sitere na P3 gaa P10 maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ntụrụndụ, emeela ọtụtụ ọrụ na-aga nke ọma n'ụwa niile.
· Ngwaahịa Atụmatụ
1. Iji gosipụta foto doro anya ma doo anya na mkpebi dị elu.
2. Ezigbo ịdị n'otu na agba dozie nsogbu Mozis nke ọma.
3. Advanced technology nke mmepụta hụ na àgwà na ndụ nke Ikanam video mgbidi.
4. Ikanam video mgbidi ịmụta na-ewu ewu video ebre software ikwado usoro arụmọrụ.
5. Ọ dị mfe maka mmezi, ma nwee ike idozi otu isi iji chekwaa ụgwọ mmezi.
6. Nwere mmetụta ngosi ngosi dị mma na foto na leta n'ihi iji teknụzụ pixel ezigbo
Na-enwu gbaa oriọna oriọna na elu-edu plastic shei.
Mfe iji wụnye na ebukọtala
Single oriọna mmezi
Ọkwọ ụgbọala na-agba ọsọ na ọnọdụ ugbu a dị ugbu a, ọkụ na-enwu ọkụ, na ike oriri dị ala
Ihe pikselụ bụ 3mm, nke nwere pikselụ 64 * 64. Pixel ọ bụla nwere 1R1G1B.
P3 full-agba ikanam electronic programmable ikanam meziri dị na a dịgasị iche iche nke shapes: akụkụ anọ, square, curved, gburugburu na ndị ọzọ na omenala aghụghọ.
P3 full-agba ikanam electronic ihuenyo nwere ike ịkwado synchronous akara kaadị na asynchronous akara kaadị n'otu oge; ọbụna n'ihe banyere njikwa kọmputa ọdịda, ọ ka nwere ike na-egosipụta kwesịrị.
Ntinye nke ogwe ihe eji eme ihe: ime ụlọ P3 LED zuru ezu na-egosipụta ihe ọkụ na-acha ọkụ, a na-eji chemical rivet bolt rivet nchara efere dị ka ihe nkwado na ogwe aka kwekọrọ na akụkụ kọlụm, na ihe ngosi ígwè egosiri ya na ígwè rivet edozi. efere.
P3 Ikanam ime ụlọ zuru-agba ihuenyo usoro na-arụ ọrụ stably na ntụkwasị obi, nwere ike mgbochi nnyonye anya ike, na-arụ ọrụ nọgidere n'ihi na ihe karịrị 72 awa. Njikwa arụmọrụ arụmọrụ sistemụ njikwa nwere ọyị-enyi na enyi ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ.
P2.5 Ime ụlọ LED Video Wall
P0.9 P1.25 Igwe ihuenyo ime ụlọ